संसारका १० रोचक र अनौठा तथ्य ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
संसारका १० रोचक र अनौठा तथ्य !
मेरो लाइफस्टाइल || 10 April, 2021
संसारमा केही त्यस्ता चिज पनि छन्, जो रोचक त छँदैछन्, साथमा हैरान बनाउने किसिमका पनि छन् । जस्तै मह संसारको एउटा मात्र त्यस्तो खाद्य पदार्थ हो, जो कहिल्यै बिग्रिँदैन । यो सयौँ वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ ।
केही पटक अनुसन्धानका क्रममा मिश्रका प्राचीन कब्रस्थानमा हजारौँ वर्ष पुरानो मह वैज्ञानिकले फेला पारेका थिए ।
तपाईले पानी धेरै किन्नु भएको होला । तर त्यसमा लेखिएको डेटको बारेमा तपाईले ध्यान दिनुभएको छैन होला । हामी डेट त हेर्छौं तर त्यो डेट पानीको हो भन्ने साच्छौँ, तर त्यो डेट पानीको नभएर बोतलको हो । पानी कहिल्यै बिग्रँदैन ।
अष्ट्रिज एउटा यस्तो पंक्षी हो जो उड्न सक्दैन । यो पंक्षीस्को सबैभन्दा ठूलो प्रजातीमध्येको एक हो । त्यस्तै कोही पनि अन्य जीवित पोथी पंक्षीले भन्दा ठूलो अण्डा दिन्छ । यसको आँखा उसको दिमाग भन्दा पनि ठूलो हुन्छ ।
चीनलाई कुंग फू कला सिकाउने व्यक्ति एक भारतीय थिए । उनको नाम बोधिधर्म थियो । उनलाई बोधिधर्मन पनि भनिन्छ । उनी बौद्धधर्मको प्रचारका लाग चीन गएका थिए । उनले त्यहाँ केही शिष्य पनि बनाएका थिए ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो माछोमध्येको एउटा माछो ह्वेल त तपाईले देख्नु भएकै होला । यसको तौल १४ सय किलोको आसपासमा हुन्छ । तर ब्लू ह्वेलको तौल १८१ किलो हुन्छ ।
आदिवासी जनजातिको अनौठो परम्परा
संसारभरका मानिसहरूको आ–आफ्नै संस्कृति र रहनसहन छ । यति मात्र होइन, मृत्युपछि मानिसको शवलाई विभिन्न तरिकाले विसर्जन गरिन्छ । आज
एलियनको बारेमा धेरै वर्षदेखि बहस चलिरहेको छ। केही मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि त्यहाँ एलियनहरू छन्। र केही मानिसहरू भन्छन् कि
ढलको पानीबाट बियर
न्यु ब्रिउ कुनै साधारण बियर होइन । यो ‘रिसाइकल’ गरिएको ढलबाट बनाइएको हो । सिंगापुरको राष्ट्रिय पानी एजेन्सी पव (पीयूबी)
जहाँ दुर्घटनाबाट बचाउन सडकले आफैँ हर्न बजाउँछ
संसारभर दुर्घटनामा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । सवारीसाधनको चाप बढेसँगै दुर्घटनाका घटना पनि बढेका छन् । पहाडी क्षेत्र वा